Somalia: Madaxweyne Farmaajo oo ku sii jeeda degmada Hobyo - Wargane News
Home Somali News Somalia: Madaxweyne Farmaajo oo ku sii jeeda degmada Hobyo
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ku wajahan magaala Xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa ka baxaya degmada Caabud-waaq oo ay xalay ku hoydeen, waxaana wararka la helayo ay sheegayaan in uu xerga ka jari doono dhismaha dekadda magaalada Hobyo.
Safarka Madaxweynaha uu ku tagayo magaalada Hobyo ayaa waxaa ku wehlinaya Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaalle Geelle Madaxa Xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, wasiiro iyo xildhibaano ka kala tirsan dowladda federaalka iyo Galmudug iyo xubno kale.
Magaalada Hobyo waxaa ka socda diyaar garow aad u baalaran oo ku aadan soo dhaweynta Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafidgiisa, waxaana wadooyinka waa weyn lagu xardhay calanka Soomaaliya.
Waxaa la filayaa marka uu madaxweynaha tago magaalada Hobyo in uu kulamo la qaato qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horeeyaan waxagaradka iyo dhalinyarada.